Colombia uPVC tsara indrindra & fananganana orinasa mpanamboatra paompy eto India
Kalitao avo indrindra uPVC
Colony Sodina mpanamboatra Pipa tsanganana uPVC tsy misy harafesina 100% miaraka amin'ny Power Lock hananganana fantsakana rano mahomby Hijery Range
Download Katalana uPVC HDPE fantsona
Manufacturer Ny fampivoarana ny sivilizasiôna sy ny indostria amin'ny ankapobeny dia naneho hatrany ny fahavitrihany hatrany tamin'ny famotehana ala ka izay rehetra natao ho fiarovana azy ireo sy ny famokarany dia tsy misy dikany tanteraka raha ampitahaina. Hijery Range Download Katalana
Mitady uPVC Colony & PVC Casing Pipe?
Orinasa mpamokatra paipa-drano uPVC
Amin'ny maha-fitantanana rano voamarina ISO 9001 anao, marika fanodinana fantsona avy any India, izahay ao amin'ny Vinyl Tubes, dia mikarakara ny filanao fitantanana rano rehetra. Manolotra Pipe Column uPVC avo lenta avo indrindra izahay, Pipe amin'ny Casing & Well Screen, Piezometric Pipe, Pipe Pressure, Pipe SWR, Pipe drainage ary Pipe Plumbing ho an'ny filanao fitantanana rano. Manolotra ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay izahay amin'ny alàlan'ny fanavaozana tsy tapaka, ny famoronana tanteraka, ny fizotrany samihafa, ary ny vokatra avo lenta.
mamaky bebe kokoa momba anay
Mahazo ny toeran'ny mpitarika amin'ny fanomezana vahaolana mahomby amin'ny fantson-drano, manome antoka ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny fandraisana anjara amin'ny fahombiazan'izy ireo.
Mpitondra manerantany amin'ny fantson-drano hipoitra ho mpitarika manerantany amin'ny indostrian'ny fantson-drano amin'ny alàlan'ny fampivoarana sy ny fandraisana ny haitao vaovao ary ny fizotran'ny dingana tsy miato amin'ny fanovana ny hevitra vaovao ho zava-misy miavaka.
Mba hampandeha tsara ny famatsian-drano rehetra manerana an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny haavon'ny fiarovana azy ireo ary mitazona ny fahafaha-mividy amin'ny fotoana rehetra. Araka izany, manantena ny hitsimbina herinaratra 1.3 miliara amin'ny alàlan'ny ezaka ataonay izahay.
uPVC Vokatra izay atolotray
Manam-pahaizana momba ny fitantanana rano
Ny mpanamboatra paompy tsanganana uPVC avo lenta avo lenta 100% fantsona tsanganana uPVC tsy misy harafesina miaraka amin'ny Power Lock ho fananganana fantsakana rano mahomby Home Our Services uPVC…
uPVC Pipe fanerena
Ny pipa fanerena uPVC dia omena socket tsotra ary mety amin'ny fampiraisana simenitra solvent sy Bell mifarana amin'ny fangatahana. Ny tena fampiharana ny Pipe Pressure uPVC dia amin'ny fambolena, ho an'ny famatsian-drano, fanondrahana rano mitete, tsipika famafazana sns, ary koa amin'ny fizarana rano fisotro.
Maninona Pipe Vinyl?
Misy antony iray ihany hisafidiananao ny fantsom-boalavo Vinyl ho an'ny filanao fitantanana rano: Matoky, manao ny marina ary azo itokisana. Matoky any amin'ny firenena 44 misy mpaninjara mihoatra ny 100+ eran'izao tontolo izao, ary fantatra amin'ny fahamendrehana mandritra ny taranaka 4 farany, izahay ao amin'ny Vinyl dia manome ny fantsona azo antoka sy manome toky ny isan'ireo vokatra.
Vinyl dia manolo-tena hanome ny mpanjifany vokatra avo lenta sy tsy misy kilema amin'ny alàlan'ny programa fanatsarana mitohy. Ny kalitao dia atao loha laharana noho ny habetsahana, izay teny filamatran'ny orinasa. Vinyl koa dia manohana ny mpanjifany amin'ny alàlan'ny serivisy teknika mitarika indostrialy, sy ny fanohanana ara-teknika ary ny fiofanana.
Ny niandohan'ny Vinyl dia niverina hatramin'ny 1941, ary natsangana ho orinasam-pianakaviana. Tamin'ny 1971, nanangana orinasa mpanamboatra PVC voalohany any Avaratra i Vinyl. Ankehitriny tantanan'ny taranaka fahatelo an'ny fianakaviana izy, Vinyl dia misongadina amin'ny maha-orinasa mihazakazaka manana fahaizana am-polotaona ao ambadik'izany.
Mirehareha amin'ny mpiasa matotra sy mahay i Vinyl, mifantoka amin'ny fananganana vokatra mpisava lalana. Noho ny fahaizany ao amin'ny orinasa dia afaka namolavola fantsona PVC sy uPVC ny Vinyl izay manome fatiantoka ambany kokoa. Vinyl koa dia namolavola lozisialy mihantona miandry patanty ampiasaina amin'ny fantsom-pifandraisana.
Ny orinasan'i Vinyl any India Avaratra dia miparitaka amin'ny velaran-tany 65,000 toradroa, miaraka amin'ny tsipika fanodinana fantsona alemanina, ary milina CNC mihoatra ny am-polony. Izy ireo dia manodina 12,000 MT an'ny uPVC isan-taona ho lasa tsanganana, casing, SWR ary fantsona faneriterena. Hisy orinasa vaovao ho avy ao amin'ny tanàn-dehibe seranan'i Kandla, manome ny Vinyl tombony ny fitaterana haingana manerantany.
Manolotra traikefa iray izahay
Fampiharana Sodina uPVC
Fanondrahana / Fambolena
Herinaratra / serasera
VINYL Pipe ho an'ny rehetra
Izahay no marika fitantanana rano voamarina ISO 9001 voamarina
Trano ho an'ny tompona
Kalitao azo antoka. State of the art manufacturing and ISO, NSF, WRAS, ASNZ, CE - voamarina ny EUROGLOBAL.
Benifits an'ny Pipe VINYL
Porofo mivaingana 100%
Tsy dia hita loatra ny fikorontanana
Tsy misy harafesina
Fahaiza-manao fatra farany ambony
Fahafaham-po ny mpanjifa
“SCG dia manohy manome serivisy miavaka sy fahaizana teknika tena tsara ho an'ny tetikasa samihafa manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe. Ny tena zava-dehibe dia ezaky ny SCG hahatakatra ny tanjon'ny tetikasa ankapobeny ary hanolotra vahaolana azo ampiharina sy mahomby. Ny fanoloran-tenany amin'ny asa fanompoana miavaka dia miharihary amin'ny asa rehetra ataon'izy ireo. “
"Nandritra ny 10 taona niasa niaraka tamin'ny SCG Industries tamin'ny tranokala voaloto ny tontolo iainana dia naneho fahaiza-manao teknika tsara hatrany izy ireo ary manome toky ny serivisy ho an'ny mpanjifa ambony. Ny fomba fiarahan'izy ireo miasa sy ny fahaleovan-tena amin'ny fotoana tena izy amin'ny fampifanarahana ny toe-javatra miova dia nitondra ny fahombiazan'ny tanjon'ny tetikasa maro. “
"Nandritra ny fotoana niarahako niasa tamin'ny SCG tamin'ity tetik'asa ity dia hitako fa manana fahalalana sy fitadiavana valiny i Mike Campbell sy ny ekipany. Miorina amin'ny fanandramana fanandramana mialoha sy fahatakarana matanjaka ny any ambanin'ny tany. toe-javatra, indrindra ny tontolon'ny fatorana. dia miasa amin'ny asan'izy ireo amin'ity tetikasa ity. "
Mamorona ny ho avin'ny rano
Inona no mitranga ao amin'ny bilaoginay?
Mifandraisa amin'ny biraonay raha mila teny nindramina maimaim-poana! Tsara foana ny manana hevitra sarotra amin'ny teti-bolanao
amin'ity dingana ity hahafahantsika mitanisa raha ilaina
Antony 5 tokony hampiasanao ny Pipe uPVC ho an'ny Tetikasa rano
Mampitombo haingana ny fahasimban'ny rafitra rano sy tatatra noho ny harafesina, ny fivoahan'ny rano ary ny vaky fantsona metaly manaparitaka ny fahafahantsika manome madio sy…
Mahasoa ve ny fandavahana rano? - Vinyl Pipe
“Miova hatrany ny tsena, ary ny torohevitra tsara dia ny mihaino ny alehan'ny tsena ary mampifanaraka ny fitaovanao, ny orinasanao ary ny tranokalanao mifanaraka amin'izay…
Fanamby amin'ny rano ao Russia- Diniho lalina
Ny fari-pahaizana momba ny kalitao sy ny toetr'andro ratsy ary ny toe-javatra eo an-toerana dia nanova ny JA Trudeau ho Yartruba Vinyl Pipe nandefa ny fantsom-piraketany tany Russia sy ny faritra CIS…
7 top uPVC Column Pipe dia manasongadina ho fantatra - Vinyl Pipe
Ny tetik'asa fitantanana rano mampiasa paompy rendrika dia miankina betsaka amin'ny fantsom-panafody mba hamoahana ny rano amin'ny fantsakana amin'ny fomba mahomby. Araka izany, miantoka ny kalitaon'ny…
Mpamatsy paompy sy paipa tsy maintsy vakiana - Pipe vinyl
Raha Boriller Boriller ianao na mpamatsy paompy ary mbola mampiasa fantsom-by dia ho anao ity bilaogy ity. Ianao dia tsy maintsy…